sanlenaing – Sunthit Myanmar
စိတ်ဖိစီးမှုများမှ ရုန်းထွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
အလုပ်တွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးနေလား? ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာတွေကြောင့် မပျော်ရွှင်ရဘူးလား? စိတ်ဖိစီးမှုများလာရင် ကိုယ်ရော၊ စိတ်ပါ ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးအောင် ပြုမူနေထိုင်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက ရုန်းထွက်ပြီး ပျော်ရွှင်စေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေရှိတာကြောင့် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်သူ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိုမိုခံစားကြရပါတယ်။ နေ့စဉ်ပေါ့ပါးတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့ တွေ့ပါ။ သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ကော်ဖီသောက်တာ၊ စကားပြောတာတွေကလည်း စိတ်ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအပြင် သူငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးတာကလည်း ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ တစ်နေ့တာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို ရေးမှတ်ထားပါ။ တစ်နေ့တာပြုလုပ်ခဲ့သမျှထဲမှာ ကိုယ်စိတ်ကျေအပ်မှုအရှိဆုံးအရာတွေကို ရေးမှတ်ထားပြီး အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်ပြန်လည်ဖတ်ရှုပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုကို ခံစားပါ။ သင့်မှာ… Continue reading စိတ်ဖိစီးမှုများမှ ရုန်းထွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Categorized as Lifestyle Tagged စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ခရစ်စမတ်နေ့တွင် ဘီစကစ်စားခွင့်မရှိပါဘူး။ ၁၆၄၄ ခုနှစ်မှာ Oliver Cromwell က ခရစ်စမတ်ကျင်းပခွင့်ကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Cromwell နည်းဥပဒေအရလည်း အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေက ခရစ်စမတ်နေ့မှာ ဘီစကစ်စားပြီး ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ကြတယ်လို့ ယူဆတာကြောင့် ခရစ်စမတ်နေ့မှာ ဘီစကစ်စားခွင့်ကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဝေလငါးတွေကို ကိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဝေလငါး၊ လင်းပိုင်စတဲ့ ရေနေနို့တိုက်သတ္တဝါတွေကို ဘုရင်မပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပြီး ထိတွေ့ခွင့်ကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရေနစ်သူကို ကယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒါကတော့ အရှေ့တိုင်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရေနစ်နေသူကို ကယ်ဖို့ပြောတာက ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ရထားဘူတာအချို့မှာ နမ်းခွင့်မရှိပါဘူး။ ၁၉၁၀ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံကထွက်ခွာမယ့် ရထားက မခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်နေတဲ့ စုံတွဲကြောင့် အချိန်နှောင့်နှေးမှုဖြစ်ခဲ့ရာကစပြီး… Continue reading ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့မှာ တားမြစ်ထားသောအရာများ
Categorized as Knowledge Tagged ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ တားျမစ္ထားေသာအရာမ်ား
သင်ဟာ ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ကူးတတ်သူတစ်ဦးလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ငွေရှာလို့လွယ်မယ့် အခြေခံနည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပါရစေ။ အရင်ဆုံး ပွဲတွေနဲ့ လူပုံတွေကို ရိုက်ကူးပါ။ ထိုနောက် သင့်ကို တဖြည်းဖြည်း လူသိများလာအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ ပွဲများကို လိုက်ရှာပြီး ဝင်ငွေတိုးအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ သင်ပျော်ရွင်နှစ်သက်သည့်အလုပ်ကို ပျော်ပျော်နှင့်ပင် ငွေရှာနိုင်သော အလုပ်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် သင်အပျော်တမ်းရိုက်ကူးသော ဓါတ်ပုံများကို ဓါတ်ပုံရောင်းချသော website များတွင်လည်း တင်ရောင်းနိုင်ခြင်းဖြင့် ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
Categorized as How To, Lifestyle Tagged သင့္ဓါတ္ပံုေတြကတစ္ဆင့္ ပိုက္ဆံဘယ္လိုရွာမလဲ?
အချိန်တိုင်း စိတ်ခွန်အားတတ်ကြွနေ အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ?
နေ့တိုင်း ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်အလုပ်လုပ်နေရာတာကို ငြီးငွေ့လာပါသလား။ သင်အလုပ်ပြီးရမှာမှန်းသိနေသော်လည်း ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ ဒါဟာ စိတ်ခွန်အားတတ်ကြွဖို့ အားလျော့နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကတော့ စိတ်ခွန်အား တက်ကြွစေရန် သင့်ဦးနှောက်ကို လှုံဆောင်ပေးမယ့် နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် ဘဝရည်မှန်းချက်ကို အမြဲစဉ်းစားနေပါ။ သင်ဟာ ယခုလက်ရှိလုပ်နေတာတွေက နောင်အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်အတွက် အခြေခံပဲဆိုတာသိအောင် အမြဲ သင့်ကိုသင့် သတိပေးနေရပါမယ်။ အပိုမတွေးဘဲ လိုအပ်တာသာလုပ်ပါ။ သင်လုပ်နေတာထက် လျှောက်တွေးနေတာဟာ သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှု ပိုပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ခွန်အားတွေကိုလည်း ယုတ်လျော့စေပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း ပေါ်လာတတ်သော အခြားအရာများကို ဖယ်ထုတ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားပါ။ ၎င်းသည် သင့်ကို အလုပ်အပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အကောင်းမြင်ဝါဒကို ကျင့်သုံးပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ပါက သင်ဟာ ဒါကို မလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး စတင်လို့မရပါ။ ဘယ်လိုအစကောင်းအောင်လုပ်ပြီး… Continue reading အချိန်တိုင်း စိတ်ခွန်အားတတ်ကြွနေ အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ?
Categorized as Lifestyle Tagged အခ်ိန္တိုင္း စိတ္ခြန္အားတတ္ၾကြေန ေအာင္ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ?
နံသာအဆီလို့ဆိုလိုက်ပါက ဒါဟာ အိမ်တွင်း မှာ မွှေးအောင်ထားတယ်လို့ပဲထင်ကြပါတယ်။ ဒီထက်သုံးလို့ရတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ယခု အိမ်မှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ အဆီတွေအကြောင်း ပြောပြသွားပါမယ်။ လာဗင်ဒါဆီ လာဗင်ဒါအနံ့မှာ ပြင်ပမှ ဖိအားဒဏ်များကို ဖြေဖျောက်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ မီးလောင်ဒါဏ်ရာကိုလည်းသက်သာစေပါသည်။ ထိုအဆီ(၂)စက်လောက်ချရုံဖြင့် ရောင်းကိုင်းနေခြင်းနှင့် နာကျင်နေခြင်းတို့ကိုပင် သက်သာနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ သံပရာသီးအဆီ လည်ပင်းယားယံမှုများအတွက် လိုအပ်သောအဆီဖြစ်ပြီး ပျားရည်နှင့်တွဲသောက်ရပါမည်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှ အနံ့ဆိုးများကိုလည်း ကင်းရှင်းစေပါသည်။ ယူကလစ်ဆီ ယူကလစ်ဆီကို ရေဖြင့်ရောဖြန်းပါက မှိုများပေါက်ဖွားမှုကို တားဆီးနိုင်ပါသည်။ ကြမ်းတိုက်ရာတွင်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ လက်ဖက်ဆီ အိမ်တွင်းလက်ဖက်ဆီဟာ ဆေးကောင်းတစ်လက်ရှိသလိုပါပဲ။ ဒါဏ်ရာတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ လိမ္မော်ပင်ရိုင်းအဆီ ဒါကတော့ အစာမကြေတာတွေအတွက် အုန်းဆီနဲ့ ရောလိမ်းနိုပ်နယ်ပေးရုံနဲ့ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဗီနီလာအဆီ အဖျားရောဂါနဲ့ တခြားဝေဒနာတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ရေချိုးရာတွင်အနည်းငယ်ထည့်ချိုးရုံဖြင့် စိတ်လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေတာတွေပါ ပျောက်စေပါတယ်။ နှင်းဆီအဆီ ဒါက… Continue reading အိမ်မှာရှိသင့်တဲ့ နံ့သာအဆီများ
Categorized as Lifestyle Tagged အိမ္မွာရွိသင့္တဲ့ နံ႕သာအဆီမ်ား
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အသက်အရှည်ဆုံးသော သတ္တဝါများ
Jellyfish ပင်လယ်ထဲမှာ ကူးခတ်သွားလာနေတဲ့ Jellyfish လေးတွေမှာ သေဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်က မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ သူတို့လေးတွေက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ၊ မကျန်းမာတဲ့အခါမျိုးမှာတောင် သုံးရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့ရဲ့ဆဲလ်တွေက ငယ်ဘဝကဆဲလ်များအဖြစ်သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့် မသေဆုံးဘဲ ဆက်လက်ရှင်သန်ကြပါတယ်။ ရေဘဝဲ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ရေဘဝဲတွေက သက်တမ်းကြာလာတာကြောင့် သေဆုံးခြင်းမရှိဘဲ ရောဂါဖြစ်မှသာ သေဆုံးတတ်ကြတဲ့ အသက်ရှည်သတ္တဝါများဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်များ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လိပ်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများက သက်တမ်းကြာသွားတာကြောင့် ပျက်ဆီးသွားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ အခြားသားရဲတိရစ္ဆာန်များနဲ့ ရောဂါများကြောင့်သာ သေဆုံးနိုင်ကြပါတယ်။ ပင်လယ်မျှော့ ပင်လယ်မျှော့တွေကလည်း အခြားမျှော့တွေလိုပါပဲ နှစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရင်တောင် ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိကြပါတယ်။ ပင်လယ်မျှော့တွေက သက်တမ်းကြာတာကြောင့် တစ်ရှူးတွေထိခိုက်ပျက်ဆီးခြင်း ကိုတောင် ခံစားရလေ့မရှိတဲ့ သတ္တဝါများဖြစ်ကြပါတယ်။ Bowhead ဝေလငါးများ ဝေလငါးမျိုးစိတ်များရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်ထိ ရှင်သန်နိုင်ကြပါတယ်။ Bowhead ဝေလငါးများကတော့… Continue reading ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အသက်အရှည်ဆုံးသော သတ္တဝါများ
Categorized as Knowledge, Lifestyle Tagged ကမၻာေပၚရွိ အသက္အရွည္ဆံုးေသာ သတၱဝါမ်ား
သင်ကံကောင်းချင်ပါသလား။ ဒါဟာ သင်စောင့်နေလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံကံကောင်းအောင် ဖန်တီးယူတတ်ရပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင် ရလာမယ့် အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီး ကြိုးစားပါက အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကံကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ၁။ သင့်အပေါင်းအသင်း စက်ဝန်းကို ကျယ်ပြန့်အောင် ထားပါ။ ၂။ အောင်မြင်မှုကို သွားရာလမ်းကို ရှာဖွေပါ။ ၃။ လူတိုင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပါ။ ၄။ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အခြေအနေများကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားပါ။ ၅။ ကံတရား ကိုယ့်ဖက်ပါနေမည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေပါ။ ၆။ အခွင့်အရေးများကို လက်လွှတ်မခံပါနှင့်။ ၇။ ကြိုးစားမှုဖြင့် မိမိကံတရားကို တည်ဆောက်ပါ။ ၈။ အကောင်းမြင်ဝါဒ ကျင့်သုံးပါ။ ၉။ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။ ၁၀။ ယခုလက်ရှိအတွက်ပဲ ကောင်းအောင်နေထိုင်သွားပါ။
Categorized as Lifestyle Tagged ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?
မေးစေ့(၂)ထပ်ကို ပျောက်စေမယ့် လေ့ကျင်ခန်းများ
မေးစေ့(၂)ထပ်ဟာ အဆီပိုများပြီး လည်ရစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပျောက်စေဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ အဝလွန်နေတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တာကြောင့် လူတိုင်း မေးစေ့(၂)ထပ်ရှိတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ယခု ဒီလိုမေးစေ့(၂)ထပ်တွေကို ပျောက်စေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ အပေါ်နဲ့ အောက် မေးရိုးတွေကို ဘယ်ညာ (၈)ကြိမ်မှ (၁၀)ကြိမ်ရွေ့လျားပေးပါ။ ခေါင်းကိုအပေါ်မော့ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုဆူကာ လည်ပင်းကို ဆန့်ပေးပါ။ ထိုကဲ့သို့ (၅)ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ လျှာကို နှာခေါင်းထိပ်ဖြင့်လှမ်းထိပါ။(၅)ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးပါ။ လေကို စုပ်ပြီး ပါးကို ဖောင်းအောင်ထားပါ။ ထိုနောက် လက်ဖြင့် ဖိပြီး လေများကို ပြန်ထုတ်ပါ။ ထိုသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ပေးပါ။ သွားများကို စေ့ပြီး ပြုံးတဲ့ပုံလုပ်ပါ။ ထိုသို့ (၈)ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာကို ဘယ်ညာလှည့်ပြီး လည်ပင်းကို ဆန့်သွားအောင် ပြုလုပ်ပါ။ မေးစေ့ကို လက်သီးဖြင့် ဖိပါ။ (၇)ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပေးပါ။ မကြာမီအချိန်တွင်း လည်ပင်း(၂)ထပ်ကို ရှာတွေ့မည်မဟုတ်တော့ပါ။
Categorized as Lifestyle Tagged ေမးေစ့(၂)ထပ္ကို ေပ်ာက္ေစမယ့္ ေလ့က်င္ခန္းမ်ား
သင့်လုပ်ငန်းမှ ဖောက်သည်များ တည်မြဲနေအောင် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ?
သင့်လုပ်ငန်းရေရှည်ခရီးအတွက် လက်ရှိဖောက်သည်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရေးကောင်းအောင် တည်ဆောက်နိုင်မလဲ။ ၁။ ပုံမှန်ပဲ ဖန်တီးပါ။ သင့်ဖောက်သည်တွေကို အသစ်တွေနဲ့ အမြဲအဆင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ရွေးချယ်ရခက်စေမယ့် အခွင့်များမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်ရိုးရှင်းစွာပဲ ရွေးချယ်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။ ၂။ အစစ်အမှန်များကိုသာထောက်ပံ့ပါ။ သင်ပြောထားတဲ့အချက်အလက်အတိုင်း မလွဲမသွေပါဝင်သော ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာပေးပြီး သင့်ဖောက်သည်နှင့် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ အသစ်အဆန်းများ ဖန်တီးမှုတွင်လည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပါ။ ရိုးရှင်းစွာဖန်တီးရမယ်လို့ ပြောခဲ့သော်လည်း ငြီးငွေ့သွားအောင် မလုပ်သင့်ပါတယ်။ အမြဲအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား စိတ်ဝင်စားလာအောင် ဆွဲဆောင်နေရပါမယ်။ ၄။ ကြည့်ကောင်းစေမယ့် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါစေ။ သင်ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းကို မည်သူကမှ ဆိုးဆိုးရွားရွားပုံစံမျိုးဖြင့် လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၅။ အသစ်အသစ်သော နည်းပညာများနင့်ချိတ်ဆက်ထားပါ။ သူများထက်နောက်မကျစေရန်အတွက် အထူးလိုအပ်သော အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Categorized as How To, Lifestyle Tagged သင့္လုပ္ငန္းမွ ေဖာက္သည္မ်ား တည္ျမဲေနေအာင္ ဘယ္ေတြလုပ္သင့္သလဲ?
တစ်ခါတွေ့ဖူးရုံနဲ့ သင့်ကို စိတ်ထဲစွဲနေအောင် မှတ်မိစေမယ့် နည်းလမ်းများ
သင့်ရဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး အသိုင်းအဝိုင်းဟာ ကျယ်ဝန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မှ သာ သင့်အတွက် အခွင့်အလှမ်းသစ်တွေနဲ့ ကြုံလာနိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် လူပေါင်းများစွာနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ယခုကတော့ ဒီလို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ချော့မွေ့စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြသွားမှာပါ။ ၁။ သင်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့လူကို အလေးထားပါ။ ၂။ သင့်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိုသူ့ဦးနှောက်ထဲတွင် စွဲထင်သွားစေမည့် ပုံရိပ်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ၃။ ထိုသူရဲ့ နာမည်ကို စကားထဲတွင် မကြာခဏထည့်ပြောပါ။ ၄။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်လွယ်မယ့် အရာမျိုးပြောဆိုဆွေးနွေးပါ။ ၅။ ဗဟုသုတ တစ်ခုခုရသွားစေမယ့် ဆွေးနွေးမှုမျိုးပြုလုပ်ပါ။ ၆။ ထိုလူကို အကဲခတ်ပါ။ ၇။ သူပြောတဲ့ စကားတိုင်းအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုပြသပါ။ ၈။ ကိုယ်အမှုအရာပါအောင် ပြောဆိုပါ။ ၉။ ထိုသူထံမှ တစ်စုံတစ်ရာကို… Continue reading တစ်ခါတွေ့ဖူးရုံနဲ့ သင့်ကို စိတ်ထဲစွဲနေအောင် မှတ်မိစေမယ့် နည်းလမ်းများ
Categorized as How To Tagged တစ္ခါေတြ႕ဖူးရံုနဲ႔ သင့္ကို စိတ္ထဲစြဲေနေအာင္ မွတ္မိေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား